Fitroaran’ny Mpianatra Ao Shily: ‘Misy Hotantaraina’ · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Septambra 2013 14:28 GMT
Shiliana mpianatra, manao hetsi-panoherana, 2011. Sary an'i Francisco Osorio ao amin'ny Flickr (CC BY 2.0)
Miara-miasa amin'ny rainy Roberto Navarrete i Pablo Navarrete, metisy Britanika-Shiliana ary mpamokatra horonantsary fanadihadiana, ao anaty fandihadiana iray mahaleotena mikasika ny hetsiky ny mpianatra Shiliana.
Tsy ela akory izay no nanombohan-dry zareo ny hetsika fanentanana ho fanangonam-bola avy eny ifotony momba ny Indiegogo, izay izaràn'izy ireo ny famintinana manaraka etoana mikasika ny horonantsary ho avy eo:
Ny Fitroaran'ny Mpianatra ao Shily dia milaza ny tantaran'ireo hetsi-panoheran'ny mpianatra mitranga ao Shily amin'izao fotoana, itakiana rafi-pampianarana malalaka sy vatsian'ny fanjakana ary ny fiovàna mahery vaika avy eny ifotony eny anivon'ny fiarahamonina. Apetrak'ilay horonantsary ao anatin'ny vanim-potoanany nisian'ny tsy hafaliana faobe tamin'ny lasitra ara-toekarena napetraka fony fitondrana jadon'i Pinochet (1973-1990), nefa mbola tena mitoetra betsaka hatramin'izao.
Ny talen'ilay sarimihetsika, Roberto Navarrete, dia nandeha nankany Shily tamin'ny 2011 sy 2012 mba hiresaka tamin'ireo mpitarika ny mpianatra, toa an'i Camila Vallejo sy Giorgio Jackson, sy koa tamin'ireo mpianatra tsotra, ary mba hahatakarana ny anton'ny mahatonga ny hetsi-panoherana ataon-dry zareo hanana fiantraikany tahaka izany ao Shily sy ho fakàn-tahaka ho an'ny hafa ao Shily sy any an-kafa.
Tsy vahiny amin'ny hafanam-pon'ny mpianatra i Roberto Navarrete; izy dia mpianatra navitrika ara-politika teny amin'ny anjerimanontolo tao Shily tamin'ny 1973, fony i Salvador Allende voaongana taminà fanonganam-panjakana iray izay nanamarika ny fanombohan'ny fitondrana jadon'ny tafik'i Augusto Pinochet.
Lahatsoratra iray nosoratan'i Christine Seifert sy Amaranta Wright vao haingana tao amin'ny Latino Life no mitantara ny tantaran'i Roberto :
“Ho setrin'ilay fanonganam-panjakana dia nanomboka nikononkonona vondrona mpirotsaka an-tsitrapo ny fikambanan'ny mpianatra tao amin'ny fakiolte momba ny fitsaboana nianarako mba handeha ho any amin'ilay tanàna mahantra any shantytowns izay tahaka ny mizaka ny mafy indrindra ao anatin'ny tranganà ady an-trano. Nirotsaka an-tsitrapo aho ary tamin'izay no nisamborana ahy. Tamin'ny misasakalina dia niditra ny trano nisy anay ry zareo ary nandidy ireo mpianatra rehetra hitsilany amin'ny gorodona. Nanomboka nitifitra ry zareo na dia tànam-polo tanteraka aza izahay. Azon'izy ireo natao tsara ny nitazona anay fotsiny. Saingy notifirin-dry zareo aho satria afaka nanao izany ry zareo.
“Nentin-dry zareo nankany amin'ny kianjam-pirenena filalaovana baolina kitra aho, toerana navadika ho fonja itambarambe avy hatrany taorian'ilay fanonganam-panjakana. Olona teo amin'ny 20.000 no nandalo tao amin'ilay kianja, olona mpankasitraka an'i Allende ny ankamaroany, nefa nisy ihany koa ireo olona hafa tsy nanana fironana ara-politika velively. Natsipy tao anatin'ny efitrano fisoloana akanjon'ireo mpilalao izahay. Tena nifanizina tao ary avy eo nalaina tsirairay izahay mba halaina am-bavany. Heveriko fa somary mba niangaran'ny vintana kely ihany aho. Voadarodaroka mafy aho, saingy tsy nampiasa herinaratra tamiko kosa ry zareo tahaka izay nataony tamin'ireo hafa.
Volana iray taty aoriana, naiditra am-ponja i Roberto. Nafahana izy tamin'ny 1974 ary niangavy azy handao ny fireneny ireo ray sy reniny, saingy naniry ny hijanona sy hiady izy. Ny Desambra 1974, nanjavona ny vadin'i Roberto ary voatery nandeha niafina tany amin'ny masoivoho Venezoeliana izy. Nahazo fialokalofana tany Angletera izy taorian'izay, saingy mbola nitohy voatàna foana kosa ny vadiny. Nanao fanentanana ny amin'ny hamotsorana azy izy tany Angletera, ary volana enina taorian'io dia tafatambatra indray ry zareo.
“Taorian'ny nanokanako ny betsaka tamin'ny androm-piainako tany Angletera nanao ny asanà mpikaroka momba ny siansan'ny atidoha, niverina tamin'ny sehatry ny fikatrohana indray aho niaraka tamin'ireo zanako. Niaraka tamin'i Pablo zanakolahy, nanangana ny Alborada Films izahay, orinasa miahy tena mpamokatra horonantsary mifantoka amin'ny fandihadiana momba an'i Amerika Latina, ary efa eo an-dàlam-pamoahana ny horonantsary iray mikasika ny hetsiky ny mpianatra tao Shily izahay ankehitriny.”
Pablo zanakalahin'i Roberto, teraka ary lehibe tany Angletera, dia niasa taminà fanadihadiana marobe momba an'i Amerika Latina. Namokatra ilay fandihadiana ‘Ao anivon'ny Revolisiona: Andro Iray Anatin'ny Fon'i Venezoela’ izy, navoakan'ny Alborada Films tamin'ny Aogsitra 2009, sy ny ‘Ny Tambajota Kolombia’, navoaka ny Novambra 2012. Nanao fandrakofana mikasika an'i Amerika Latina izy ho anà fampahalalam-baovao isankarazany, isan'ireny ny Al Jazeera amin'ny teny Anglisy, ny Guardian sy ny BBC.
Niresaka tamin'i Pablo aho momba ilay fanadihadiana hivoaka eo mikasika ny hetsiky ny mpianatra ao Shily sy ilay fanentanana ho fanangonam-bola eny ifotony ataon-dry zareo.
Global Voices (GV): Ahoana no nahatonga anao ho liana amin'ny hetsika ataon'ny mpianatra ao Shily?
Pablo Navarrete (PN): Nanaraka ahy tamin'ny diako nankany Venezoala sy Kolombia ny raiko, ary nahita hevitra iray izy. Siantifika, mpahay siansa momba ny atidoha no tena nataony, saingy niato izy ary naniry hanao zavatra hafa mikasika ny tetezamita tao Shily. Nandrakitra horonantsary ireo taona maro samihafa izy tany ary nanao fandraisam-peo marobe, saingy tetikasa iray goavana ilay izy ary afaka nahita aho hoe lohahevitra iray tena mahaliana ny hetsiky ny mpianatra, ary io no nandrafitra ny vaovao tany Angletera sy tany rehetra tany, ary tsapako fa nisy fanontaniana nanana ny toerany momba ny lasitra ‘néolibéral’ tao Shily izay nitsofoka ny nihanaka tany amin'ny ambaratonga rehetra tany anaty fiarahamonina.
Araka izany dia nanoso-kevitra aho, ho solon'ny fanaovana an'io fanadihadiana goavana, saro-takarina io dia mba hanandrana fotsiny izy hanao zavatra kelikely kokoa, ary hifantoka fotsiny amin'io tantara io sy angamba hametraka azy io ho ao anatin'ny vanim-potoana ara-tantara ary hanandrana hanome vaovao mikasika ny hoe lasitra inona marina ary ahoana no misy fangatahana betsaka kokoa noho izay tena mifamatotra tanteraka amin'ny fanabeazana, nefa dia kiana lalina kokoa momba ny fiarahamonina Shiliana sy ny zava-navelan'ny fitrondrana jadona.
Izaho dia iray mino mafy tokoa fa ny votoaty no fanalahidy, na dia zava-dehibe aza ny fomba fanehoana; raha atao bango tokana, rehefa tsy maintsy hisafidy ianao, dia ny votoaty, ary dia misy votoaty ao anatin'io horonantsary io –misy hotantaraina.
GV: Betsaka ny fanadihadiana mikasika ny hetsiky ny mpianatra Shiliana no navoaka. Inona no maha-samy hafa ny anareo ?
PN: Heveriko fa feno zavatra betsaka tsara, raha ny marina. Antenaina fa ny tena hampisy an'izay fahasamihafàna izay dia izy manindry betsaka kokoa ny tantara, ny fototra, ny vanim-potoanan'ilay fitroarana, ireo hetsi-panoherana ary ny kiana. Miresaka momba ilay hetsika ny olona, saingy misy fironana sy adihevitra betsaka, eny fa na dia ankehitriny aza raha jerena ny fanohanana [ny mpirotsaka ho filoham-pirenena sady filoha teo aloha Michelle] Bachelet. Araka izany, amin'ny endriny iray dia manandrana isika maneho fa hoe hetsika iray tena mitalakotrokotroka io, saingy any anatin'ny adihevitra ifanaovan'izy samy izy mikasika ny fomba fijery isankarazany ny politika, dia tsy hetsika iray monja izy io.
Izany, ary koa ny zava-misy hoe isika manindry ny tantara sy ny vanim-potoana sy ny hoe avy aiza no nihavian'io.
GV: Lazalazao anay ny mikasika ilay fanentanana ho fanangonam-bola avy eny ifotony.
PN: Noraketina anaty horonantsary izany, ary hivoaka, noho izany tsy hiteny izahay hoe “manolora, ary raha tsy mahazo izay sahaza izahay dia tsy afaka ny hahavita an'io”. Efa tapa-kevitra izahay hamokatra io lahatsary io, ary ny fanapahan-kevitra dia ny hamokatra io horonantsary io. Amin'ireny fanadihadiana ireny, matetika ianao no manao azy tsy ho entina hitadiavam-bola. Nefa ny fitadiavam-bola avy any ifotony dia mitodika aminà tanjona roa: mazava be fa manampy anao hamerina ny sasany tamin'ny fandaniana nentina namokatra ny horonantsary sy ny famoahana azy izy io; ary faharoa, tsy ho nisy izao dinidinika ataontsika izao raha tsy nandefa ny fanentanana izahay, araka izany dia hitanao fa izay ampahany fananganana tambajotra iray mamela anao hanao zavatra tsy miankina izay dia fahalalàna hoe iza no liana amin'ilay lohahevitra. Mazava be fa goavana izany manatontosa zavatra nangatahan'ny fahitalavitra izany, saingy ery amin'ny farany kosa dia tsy tsara fiomanana hanao marimaritra iraisana mikasika zavatra sasantsasany tiako hatao aho. Heveriko araka izany fa zava-dehibe ny manana drafitra B, ary ny fanangonam-bola avy eny ifotony no nanampy anay hampisongadina ireo mpanaraka, na hampijoro mpanaraka.
Pablo, Roberto sy ireo tarika kelin-dry zareo dia maminavina fa ho vonona amin'ny Novambra 2013 ilay horonantsary, tena ao anatin'ny fotoam-pifidianana izay ho filoha ao Shily mihitsy, izay, araka ny anipihan'i Pablo azy, mety hitondra hery vao ao anatin'ilay hetsika satria ireo mpianatra dia manohy manao tsindry mba hanavaozan'ny governemanta vaovao ny rafi-panabeazana ao amin'ny firenena.